कोरोना संक्रमितलाई अत्याउने काम बन्द गरौं : कलाकार श्रीकृष्ण सिंखडा
हौसला र उच्च आत्मबलले औषधीको काम गर्छ
२०७७ असोज २१ बुधबार १०:४१:००
कलाकार श्रीकृष्ण सिंखडा
शुभ प्रभात, आज ४ दिन भयो । भोलि केही हुन्छ कि को डरमा हैन कि केही हुन्न भन्नेमै रहनुपर्छ । पहिला त आफूलाई कोरोना लागेपछि कोरोना छ भनेर त्यस विषयमा मात्रै सोच्ने काम गर्दै नगर्नुहोस् । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पूर्ण पालनामा ईमान्दार भएर लाग्नुहोस् । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू हामी जोकोहीले अक्षरशः मान्नुपर्छ ।
म अल्लि पहिलेदेखि नै बिरामी मान्छे, त्यसमा पनि मुटुमै समस्या । जीवनमा हरेक समस्या आउँछ र त्यो समाधान पनि हुन्छ । तर हिम्मत गर्नुपर्छ मलाई केही हुन्न, हुँदैन भनेर । कोरोना संक्रमित हुँदैमा कोही आत्तिनु पर्दैन । व्यक्तिगत रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्दै दैनिक कार्य संचालन गरौँ ।अत्ताउने काम कसैबाट नहोस् । कोरोना जितिसकेकाहरूले हौसलाका शब्द बोलौँ । उच्च आत्मबल राखे मात्र कोरोनासँगको लडाइँ जित्न सकिन्छ । कोही गरिब संक्रमित भएका छन् भने आवश्यक सामग्री लगिदिएर सहयोग गरौँ । ढोका मा राखिदिऊ । सामाजिक रूपमा सहयोगी भावना ले कोभिड नियन्त्रण मा प्रतिबद्ध बनौँ ।
कोभिडको उपचार छैन । कोभिड हुने बित्तिकै आइसोलेसनमा बस्नु पर्छ ।आइसोलेसनको उचित र पर्याप्त व्यवस्थापन छैन भने परीक्षण गर्नुको अर्थ के ? फेरि नेपालमा ठुलाबडा,खानदानी र सेलिब्रेटीहरुले सामान्य संक्रमण मात्र भएर निको भएपछि निकै ठूलो हल्ला फिँजाउने लहर नै चलेको छ । आफू पाँचतारे होटेलमा बसेर निस्केपछि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर अत्ताउने मान्छेलाई ? नेपालमा खानदानीलाई लाग्ने कोभिड र हुँदा खानेलाई लाग्ने कोभिड २ प्रकारको छ । त्यसैले कसैबाट पनि अत्ताउने काम नहोस् ।
गरिबले महामारी कसरी पचाउँछन्, हजुरबाले भोगेको हामीले सुनेका छौं । नेता,मन्त्री र उच्चपदस्थहरूले जसरी कोरोना संक्रमित हुँदा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । आज एउटा गरिब नेपाली जनताले कोभिडले सताउँदा समेत आइसियु र भेन्टिलेटर पाइरहेका छैनन् । त्यसैले कोरोनासँग लड्ने सबैभन्दा ठूलो उपाय उच्च आत्मबल नै हो । सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेका मापदण्ड पालना गर्दै आफूमा देखा परेका स्वास्थ्य समस्या अनुसारका औषधीको सेवन गर्नुपर्छ । यसबिचमा निको भएकाका अनुभवबाट हौसला लिँदै सकारात्मक सोच राखे, यसलाई अवश्य जित्न सकिन्छ । म पनि जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छ । अतः कोरोना सङ्क्रमितलाई नअत्याऔं, सक्दो हौसला प्रदान गरौँ । सबै मिलेर कोरोना विरुद्धको लडाई जित्नु छ ।